I-Semalt Expert ichaza indlela yokukhupha i-Traffic Internal ku-Google Analytics
Abantu bajonge ukusebenzisa i-Google Analytics ekhululekile kwiwebhu. I-Google inikezela ngenkonzo ukunceda abanikazi bewebhusayithi ukulandelela kunye nokubeka esweni zonke izithuthi ezithatha iziza zabo ukukhusela abanikazi ekuthungeleni ugaxekile kunye nezinye iintlobo zogaxekile. Kubalulekile ukuba abantu baqaphele ukuba imisebenzi yabo kwisayithi inokuvelisa i-Google Analytics inokuyithatha kwaye ifake kwiingxelo. Ukuba umntu akayivali le ntlawulo yangaphakathi, akukho ndlela yokuqinisekisa ukuba iziphumo ezifunyenweyo zichanekile. Ukukhusela i-traffic yangaphakathi kuthetha ukuba umntu akabandakanyi ukutyelela kwabo kwisayithi, kunye nabasebenzi, kunye nabani na onokufikelela kwisayithi evela kumbutho - attrezzi palestra scuola di.
Indlela yodwa umntu eya kulandela ukufumana iziphumo zezithuthi zengqiqo ngaphandle kokukhathala ngokungabandakanyi i-traffic yangaphakathi ekukhawuleni ngama-analytics. Ukubaluleka kwalokhu kukuba i-traffic yangaphakathi ayinelanga kuphela iingqinamba zendlela zendlela kodwa iirhafu zokuguqulwa kwakhona. Ukulungisa lo mbandela kulula, kwaye abasebenzisi banokukhetha phakathi kokukhethwa ezimbini.
URyan Johnson, uMphathi oyiNtengiso we-12 (Semalt , ukhangele iikhokelo zokulandela indlela nganye ephakanyisiweyo.
Izindlela ezingabandakanywa kwiThutho zangaphakathi
# 1 Akukho-add-on ye-Google Analytics
Le ndlela isebenza njengenye yezindlela ezilula ukusetyenziswa ukukhusela i-traffic yangaphakathi ukusuka kumbutho. Ngaphandle kweNgcaciso yeGoogle Analytics, akukho ndlela apho isixhobo singakwazi ukulandelela imisebenzi yangaphakathi. Isebenza kakuhle nomshicileli we-Firefox. Ukuba umntu akakwazi ukusebenzisa ukongezwa, kukho enye indlela. Abasebenzisi banako ukusebenzisa i-Google Analytics yokukhethwa kokuphuma. Isebenza ngendlela efana ne-Google Analytics njengoko ikhusela zonke izithuthi ezingenayo kwizithuthi zangaphakathi. Xa kuthelekiswa neyokugqibela, isebenza kwiziphequluli eziliqela. Ezi zikhangeli zifana ne-IE, Safari, Google Chrome, Firefox, kunye ne-Opera..Xa usebenzisa le zandiso, khumbula njalo amanqaku alandelayo:
Ukongezwa kusebenza kuphela kunye nesiphequluli esisisetyenziswa ngumsebenzisi. Abantu akufanele bacinge ukuba kusebenza kuzo zonke iiphequluli nje ngokuba kusekho. Ukuba umntu usebenzisa iiphequluli ezininzi, qiniseka ukuba ufake ifowuni nganye kwezi zikhupheli.
Kwakhona, ukwakhiwa kwelolu hlobo aluyikuthintela ezinye iiwebhusayithi ukuba zingabonakali kwiingxelo zendlela. Benza kuphela ukukhawulela ukufikelela kwiGoogle Analytics kuzo zonke iiwebhusayithi zangaphakathi.
Ukuba nabani na onqwenela ukuba iGoogle Analytics ifinyelele ulwazi, vala kuphela ukhubaze ukongeza.
# 2 Hlela i-Google Analytics IP Filter
Inkqubo yokuthintela i-traffic yangaphakathi iyinto eqhelekileyo kubantu abagcina ingqibelelo yeedatha zabo zendlela. Yingakho i-Google isekela izihlomelo ze-ipv4 ne-ipv6. Ngokuthintela idilesi ye-static IP, ngoko kunokwenzeka ukuvimba zonke izithuthi ezivela kule dilesi ye-IP. Nantsi indlela yokuhamba ngayo:
Ukuba umntu ufuna ukufumana idilesi yakhe ye-IP, kufuneka ahambele iwebhusayithi ye-CmyIP. Kopisha okanye uqaphele idilesi ye-IP.
Vula i-Google Analytics kunye nenkokhelo kwikhetho lolawulo.
Emva koko, Khetha iifayile phantsi kweCandelo le-Akhawunti.
Khetha ukongeza ifayile, uze unikeze icebo elitsha lomxholo.
Uluhlu lwefayili kufuneka lubekwe ngaphambili.
Khetha ukukhuphela kwimenyu ebonakalayo kwaye ufaka idilesi ye-IP ongayifuni iirekhodi zendlela.
Le nto ihoywa isithuthi kwidilesi ethile ye-IP. Ukuba umntu uzimisele ukungabandakanyi uluhlu lwee-adesi ze-IP, landela inkqubo efanayo apha ngasentla. Nangona kunjalo:
Khetha isiko kwisihlunu.
Kukhona inkundla yecwecwe ukugcwalisa phantsi kwekhefu lokukhetha ngaphandle kwaye ukhethe idilesi ye-IP.
Umzekelo wefayile kufuneka ifake ibinzana ehambelana nazo zonke idilesi ze-IP ezifunayo ukuba zingabandakanyi.